Ukuzola, indawo ephangaleleyo kwaye ezimeleyo + isidlo sakusasa! - I-Airbnb
Ukuzola, indawo ephangaleleyo kwaye ezimeleyo + isidlo sakusasa!
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRiccardo
Indawo yam ikufuphi neVenice, Cortina, Prosecco hills, Conegliano, Treviso. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yesidlo sakusasa esikumgangatho ophezulu, iimbono, abantu, indawo, ukuthula.Indawo yam ilungele izibini, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya) kodwa kuphela ukuba zigcinwe ngaphandle kwendlu.Abantwana bamkelekile kwaye iziganeko ezincinci okanye isidlo sakusihlwa sinokuhlelwa ekhitshini elizimeleyo phantsi.
Siyintsapho nje enomoya wokubuk’ iindwendwe ophuhlileyo. Indlu intle kakhulu kwaye ijikelezwe yiyadi enkulu, enendawo eninzi yokupaka imoto okanye ibhayisekile yakho. Onke amagumbi kunye neendawo zigcinwa zicocekile kwaye zicocekile.
4.93 · Izimvo eziyi-160
Indawo yokuhlala intle kwaye izolile. Iindawo ezimbini ezenza iipizza ezilungileyo kakhulu zikwi-100 yeemitha kude nekhaya.Ukusuka kwigumbi lakho kwakhona unombono omnandi wecala elingasemva le-monastery endala ekufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Riccardo
Sifumana uyolo ekunxibelelaneni neendwendwe zethu kwaye sabelane nabo ngalo lonke uthando lwethu lweyure ekhaya kunye nedolophu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vittorio Veneto